वडा अध्यक्ष थापाको निधन
लमजुङको राइनास नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष ६८ बर्षीय देवबहादुर थापाको निधन भएको छ ।
कीर्ते कारोबार : रक्षक ठानिएका वडा अध्यक्ष यसरी भए भक्षक
रुपन्देही– जग्गा धनीको नाम गरिब कोहार हो, उमेर ६९ वर्ष । रुपन्देहीको सांस्कृतिक नगरपालिका–१०, मधुवनीमा उनको नाममा १० कठ्ठा १७ धुर जग्गा छ, कित्ता नम्बर ४८८ र ५०७ । अहिले उक्त जग्गाधनीको नाम अर्कै छ, गोविन्दप्रसाद कोहार । सन्दीप कार्की हुँदै जग्गाधनीको नाम गोविन्दप्रसाद कोहार भएको हो । नागरिकता प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको फोटो प्रमाणितसहितको किटानी […]
एमालेबाट निर्वाचित पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्षको निधन
पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका वडा नंं ४, मित्यालका वडा अध्यक्ष न्योबहादुर सुनारीको मृत्यु भएको छ। वडा अध्यक्ष सुनारीको उपचारको क्रममा लुम्विनी मेडिकल कलेज तानसेन प्रभासमा मृत्यु भएको हो।
वडाध्यक्षको हृदयघातका कारण निधन
काठमाडौं : मनाङको नासों गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष छिरिङ ग्याल्पो पुनेलको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। ५० वर्षीय वडाअध्यक्ष पुनेलको सोमबार हृदयघातका कारण निधन भएको हो। नासो गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेका अनुसार उनको सोमबार बिहान हृदयघातका कारण निधन भएको हो। सोमबार बिहान खाना नखाँदै बेंसीसहरस्थित एक होटलमा हृदयघात भएपछि उपचारको लागि उनलाई जिल्ला अस्पताल लमजुङ लगिएको थियो। उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको उनलाई अस्पतालले सोमबार बिहान ११: ५५ मृत घोषणा गरेको हो। वड
दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत । कोरोना संक्रमितको निधन भएपछि नेपाली सेनाले शवव्यवस्थापनगर्दै आएको छ । तर,कतिपयगाउँमा सेनालाई बोलाउन कठिन छ । अझै परिवारका सदस्यमा संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमितको छेउमा गएर शवव्यवस्थापन गर्न कुनै गाउँले पनि अघि सर्दैनन् । संक्रमितहुने डरमा गाउँघरमा चलेको ‘मर्दाको मलामी’को भूमिकापनि हराउँदै गएको छ । आफन्तहरूसमेत शव छुन डराउने गरेको बेलापर्वतका एक […]
कोभिड १९ संक्रमणकै बिचमा वडा अध्यक्षको गयो ज्यान
जनकपुरधाम : धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष बिनोदकुमार मण्डलको कोरोना संक्रमणकै बिच मृत्यु भएको छ। वडाध्यक्ष मण्डलको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारभए भएको मिथिला बिहारी नगरपालिकाका प्रमुख अनिलकुमार यादवले जानकारी दिए। वडा अध्यक्ष विनोद कुमार मण्डललाई करिब दुई साता अघि ज्वरो, रुघाखोकी सहितको लक्षण देखिएको थियो।…
वडाअध्यक्ष एवं नेपाल भाषाका गीतकार शाक्यलाई मातृशोक
न्युज अफ नेपाल, ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका– १६ का वडाअध्यक्ष एवं नेपाल भाषाका तीन दर्जन भन्दा बढी गीतका रचनाकार निर्मलरत्न शाक्यलाई मातृशोक परेको छ । उहाँकी आमा धर्मलक्ष्मी शाक्यको ८० वर्षको उमेरमा बुधबार राति निधन भएको हो । कोरोना संक्रमणको उपचार गराउने क्रममा उहाँको काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको थियो । दमको सामान्य रोगले […]
मस्तिष्कघातका कारण वडा अध्यक्षको निधन
काठमाडौं : मस्तिष्कघातका कारण कीर्तिपुर नगरपालिका– ७ का वडा अध्यक्ष राजकुमार मालीको मृत्यु भएको छ। मस्तिष्कघातपछि ललितपुरको वयोधा अस्पतालमा उपचाररत मालीको आइतबार साँझ निधन भएको कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले जानकारी दिए। आज उनलाई श्रद्धाञ्जली दिइने र नगर परिक्रमासहित अन्तिम संस्कार गरिने महर्जनले बताए। माली नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत हुन्।
म्याग्दी / म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का वडा अध्यक्ष ६५ वर्षीय दिनेशकुमार तिलिजाको शुक्रबार साँझ निधन भएको छ । उनी लामो समयदेखि प्यारालाइसीस (पक्षघात) बाट थालिएका थिए । उनको निधन पोखरा महानगरपालिका–११ फुलबारीस्थित निवासमा भएको वडाका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश तिलिजा पुनले बताए। शवको अन्त्येष्टि शनिबार पोखरामै गरिने भएको छ। गत साउनमा एक्कासी बिरामी भएपछि उनलाई उपचारका... The post वडा अध्यक्षको निधन appeared first on Purbeli News.
बाँके – बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष रामसोहन थारुको आइतबार बिहान निधन भएको छ । ब्लडप्रेसर कम भएका ६० वर्षका थारुको हृदयाघातका कारण निधन भएको नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय सभापति माधवराम खत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका श्रीमती, २ छोरा र २ छोरी रहेका छन् । थारु नेपाली कांग्रेसको वडा कार्...